Kungani abantu abamhlophe behlala bemelela uSATAN njengomuntu omnyama? ... Ngisho nabanye odadewethu kanye nabazakwethu abamnyama bayakholelwa ukuthi uSathane (waye) omnyama, njengoba abameleli bohlanga abamhlophe besimele, bavame ukusizwa ngozakwethu
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Juni 16, 2018 00: 35 Awekho amazwana
Kepha, njengoba umuntu omnyama egxila epharadesi lapho kufanele azuze ifa ngazo zonke izindlela, amalungelo akhe aphambili aphulwa, isithunzi sakhe singabuzwa, akusho lutho kuye. Uvuma ukuhlukumeza uhlanga lukaNkulunkulu kanye nepharadesi elingathandeki.
Kepha labo bantu bobandlululo abenza lezi zinhlobo zezethulo bakhohlwa into eyodwa, ukuthi amacala kababa kaJesu nabantu bakhe kwiTestamente Elidala ayebaphindwe kasigidi kunalawo enziwa uSathane. Futhi iningi labo lalimelene ne-Ethiopia, izwe lase-Afrika.
Iphutha leBhayibheli likaSathane esanda kubulala abantu be-4 ngakho abantwana bakaJobe (Jobe 1: 19-20) isenzo sobugebengu esincane kakhulu kunomdali wezulu nomhlaba, oye wamisa umhlaba wonke.
Ukungabi namandla kwabantu abamnyama / ama-Afrika: abamnyama kuphela / ama-Afrika angaziphatha kanjena; iqembu labokufika baseNigeria elithandazela impumelelo, ukunqoba kweqembu lebhola lezinyawo (i-Arsenal FC, eNgilandi)
I-Oct27 09: 18
HI / LO: 17/12 p
HI / LO: 10/5 p
HI / LO: 11/4 p
Imibuzo yesiko elijwayelekile kwabaMnyama / base-Afrika: bafowethu nodadewethu abathandekayo abaMnyama / base-Afrika, lokhu akusikho ukuhlolwa kwengqondo, noma izinga, noma umbuzo welukuluku, ingasaphathwa eyombuzo wezemfundo, kepha ukubheka izinga lakho lesiko elijwayelekile ; ngicela uphendule lo mbuzo olula ngeziqiniseko ezimbalwa:
Ngo-Okthoba 27, 2020 00: 00
Isihlathi sesivele sisunguliwe: abamnyama / abantu base-Afrika sebesungule isondo, abasazami ukusungula obekuvele kuyikho; cishe yonke into ekhona ezweni lanamuhla, isivele inezinhlobo zayo zomhlaba wasendulo, njenge: izakhiwo, imibhoshongo, izinhlobo zamabhilidi esihlala kuwo, imibhede esilala kuyo, ngisho ugesi ... (VIDEO)
Ngo-Okthoba 26, 2020 08: 18